Calrec Audio – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » Tag Archives: Calrec အသံ
Tag Archives: Calrec အသံ
HEBDEN BRIDGE, UK, JUNE 4, 2019 — With the Korean pop music industry riding the wave of success generated by K-pop, KBS Radio requiredasignificant technology upgrade. Two Artemis Light consoles for Happy FM and Cool FM stations have joined Radio 3’s Summa. Kim Kiyong, Deputy Manager at KBS Radio Production Technology, commented, “The Korean music scene is booming, ...
Calrec အသံ NAB 2019 မှာ virtual Solutions နှင့်အတူအသံလွှင့်များ၏အနာဂတ်တင်ဆက်ပေးတယ်
Las Vegas, မတ် 12, 2019 - Calrec Audio (Booth: C7408) စွမ်းဆောင်ရည်ဒါပေမယ့်လည်းငွေတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြနေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမျိုးအစား R. ၎င်း၏ VP2 headless ရောစပ်စနစ်, RP1 2U rackmount အသံလွှင့်ဖော်စပ်စနစ်, နှင့်၎င်း၏ modular အိုင်ပီ-based system အပါအဝင် NAB မှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်, virtualized solutions ကို, ပြပါလိမ့်မည် "ကျော်တစ်ဦးမြင့်တက်ဝယ်လိုအားရှိခဲ့သည် ...
တစ်ငါး Calrec Console အဝင်းနှင့်အတူ Torneos y က Competencias UPS က၎င်း၏ဂိမ်း
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, ဖေဖော်ဝါရီ 26, 2019 - Torneos y က Competencias တိုးတက်လာသောအသံအရည်အသွေးကို၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ငါး Calrec consoles စများဝယ်ယူနှင့်အတူစွမ်းရည်ရောစပ်တိုးမြှင့်ထားသည်။ သုံး Brio36 consoles စနှစ်ယောက်လူတို့၏အာတေမိအလင်း consoles စပြီးသားနှစ်ခု Brios နှင့် Summa ပါဝင်သော၎င်း၏စက်ရုံအတွက်ရှစ် Calrec consoles စဖို့ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်းရဲ့ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပါပလော Mascitelli, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမန်နေဂျာ ...
Calrec ရဲ့အာတေမိအလင်း Console အဂျပန်ရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် FM ရေမှတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေဘို့ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်နှင့်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေ
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2019 - ကတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုနှင့် On-လေကြောင်းအပါအဝင်ပိုပြီးပီပီထုတ်လွှင့်မကိုင်တွယ်နိုင်အောင်ဂျပန်ရေဒီယိုဘူတာရုံဂလားပင်လယ်အော် FM ရေက၎င်း၏ Analog စ system ထဲကနေအဆင့်မြှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတူဒီယိုတစ်ခုမှာအတွက် Calrec တစ်ဦးထံမှအာတေမိအလင်းအသံ console ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် အသံဖမ်း။ အဆိုပါ Chiba စီရင်စုတလျှောက်လုံးစုစုပေါင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် FM ရေထုတ်လွှင့်ဂီတနှင့်သတင်း၌ငါးစတူဒီယိုအတူ။ ...
Calrec ရဲ့နောက်ဆုံးနည်းပညာအပြည့်အဝရွက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး-Class ကိုစွမ်းဆောင်ရည် Venue မှ Added
Winter Park, FL, အောကျတိုဘာ 23, 2018 - အပြည့်အဝရွက်တက္ကသိုလ် Calrec အသံရဲ့အာတေမိနှင့် Brio36 consoles စနှင့်အတူ၎င်း၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစွမ်းဆောင်ရည်နေရာ, အပြည့်အဝရွက်တိုက်ရိုက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ယခုပင်လျှင်က၎င်း၏ရုပ်ရှင်ဒီဂရီအစီအစဉ်အတွက်၎င်း၏ Show ကိုထုတ်လုပ်မှုဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့် Brio console ကိုတစ် Summa console ကိုအသုံးချဖို့, အပြည့်အဝရွက် Calrec ရဲ့အဆင့်မြင့်အသံဖြေရှင်းချက်သိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုထဲမှာ "လက်ရှိထုတ်လွှင့်အသံ console ကို ...
TVB ဟောင်ကောင်သုံးလူတို့၏အာတေမိ console ၏အရစ်ကျနှင့်အတူ၎င်း၏ Calrec Tech မှ Upgrade လုပ်ဖို့ Continues
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, အောကျတိုဘာ 16, 2018 - TVB, ဟောင်ကောင်တွင်အကြီးဆုံးရုပ်သံဌာန, မကြာသေးမီကယင်း၏ဆက်လက်အသံနည်းပညာအဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်ခုလူတို့၏အာတေမိ Beam ကိုတအာတေမိအလင်းအသံ consoles စဝယ်ယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်တပ်ဆင်မှရှစ် TVB မှာလူတို့၏အာတေမိ consoles စများ၏စုစုပေါင်းဆောင်ခဲ့ရမည်။ "ကျနော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယိုထဲမှာ Calrec အာလဖ consoles စတဲ့အလွန်ခဲ့ကြသည် ...
Impulse core ကို AES67 နှင့် SMPTE 2110 ဆက်သွယ်မှုနဲ့အစွမ်းထက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လမ်းကြောင်းအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ပီကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ, မျက်နှာပြင်များကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့် COTS ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသုံးပြီးစံကွန်ရက်များကျော်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုနောက်မျိုးဆက်အသံဖိုင် (Nga) နှင့် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများဖို့အကူးအပြောင်းလုပ်ရှိသမျှ Calrec ဖောက်သည်ဖွနှင့်မပါဘဲဒါလုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးပါသည် ...
Calrec အိန္ဒိယတွင်ရောင်းချသုံး Brio စက်များနှင့်အတူအာရှရောတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, အောကျတိုဘာ 2, 2018 - Calrec အသံအိန္ဒိယထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာသုံး Brio36 အသံ consoles စများရောင်းချမှုနှင့်အတူအာရှအတွက်၎င်း၏ခြေရာကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Sun ကထုတ်လွှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနယူးဒေလီတိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးအသုံးပြုမှုအတွက်အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားထုတ်လွှင့်နှင့်အတူ consoles စ installed ။ "ဘယ်မှာထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်အိန္ဒိယ, ကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်များတွင် ...
မေရီလန်းပြည်နယ်ပြည်သူ့တီဗီ Console အ Upgrade နဲ့အတူ Calrec အပေါ် Count မှ Continues
OWINGS Mills, MD စကျတငျဘာ 25, 2018 - Long-အချိန် Calrec အသံသုံးစွဲသူနဲ့Emmy®ဆုရဘူတာရုံ, မေရီလန်းပြည်နယ်ပြည်သူ့တီဗီ (MPT က), တစ်ဖန်ယင်း၏စက်ရုံသို့ 56-fader အာတေမိ console ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူ Calrec လှည့်ထားသည် ။ Calrec ရဲ့ Hydra2 ကွန်ယက်ကိုလည်းရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ Calrec ရဲ့အာလဖ consoles စနှင့်အတူဆုရထုတ်လွှင့်၏ 16 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက် MPT ကအဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
Calrec IP ကိုတစ်ကမ္ဘာ့ဖို့ဂိတ်ဖွင့်လှစ်
အဆိုပါ H4-IP ကို ​​Gateway မှာနှင့် AoIP ရွေ့ပြောင်း I / O controller ကိုကဒ်: - အမ်စတာဒမ်, စကျတငျဘာ 2018, 2018 Calrec အသံ IBC 8 (61.C2 ရပ်) မှာအသစ်နှစ်ခုကိုအိုင်ပီထုတ်ကုန်ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန် SMPTE 2110 / AES67-သဟဇာတဖြစ်ကြပြီး Calrec ယခုကမ်းလှမ်း AoIP ဖြေရှင်းချက်၏အကွာအဝေးကိုချဲ့ထွင်။ ဤရွေ့ကားသစ်နှစ်မျိုးဖြေရှင်းချက် Calrec ရဲ့အသစ် Impulse core ကို, Apollo နဲ့အတူအသုံးပြုမှုများအတွက်ဇာတိ-IP ကိုအမာခံအပေါ်တည်ဆောက် ...
Plus အား4အသံနှစ်ဦး Calrec Summa စက်များနှင့်အတူ၎င်း၏ငှားရမ်းခြင်းရွေးချယ်ရေးတက် AMPS
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, ဇွန် 19, 2018 - ဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူအသံအာကာသအတွင်းအလွန်အမင်းတက်ကြွငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်, Plus အား4အသံကအကောင်းဆုံး-In-ဖောက်နည်းပညာက၎င်း၏ client များကမ်းလှမ်းရဲ့သေချာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့, ကုမ္ပဏီမကြာသေးမီက Calrec အသံကနေနှစ်ခု 44-fader Summa consoles စဝယ်ယူခဲ့သည်။ Plus အား4အသံ, ITV, BBC, Channel ကိုအပါအဝင်အများအပြားထင်ရှားတဲ့ထုတ်လွှင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် ...
စပိန်-အခြေခံ tilt တစ်ဦးက CALREC Artemis console နဲ့သူ့ရဲ့ mobile PRODUCTION UNIT OUTFITS
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, မေ 15, 2018 - မက်ဒရစ်-based စောင်းတစ် bespoke အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့် service provider ကသူ့ရဲ့ UM48HD မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုယူနစ်များအတွက် Calrec နေ 003-fader အာတေမိအလင်း console ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အားကစား, ဂီတဖြစ်ရပ်များ, ကြော်ငြာကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဖောက်သည်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ် tilt ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတိတ်နှစျတှငျသိသိသာသာစိုက်ပျိုးထားပါတယ် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 512345	»